အခမဲ့ YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများ | အခမဲ့ YouTube ကိုအကြိုက်များ
Custom YouTube Graphic ကိုဝယ်ပါ
အခမဲ့ YouTube မှာယူသူနှင့်အခမဲ့ YouTube ကြိုက်သူများ
ယနေ့တွင်သင်၏ YouTube Channel ကိုရဲ့ကြီးထွားမှုမြှင့်တင်ရန်,
ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်းသောကွန်ယက်ကိုသငျသညျ YouTube ကို subscriber များအားရဖို့ရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်သင့်ချန်နယ်များအတွက် likes ။ အင်အားစိုက်ထုတ်ကြီးထွားမှုအတွက် Excellent က paid ရွေးချယ်စရာလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
အခမဲ့ယူကျုးယူသူများအခမဲ့ရယူပါ or YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများကိုဝယ်
ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းသင့် YouTube channel ၏တိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ပါ။
1 အဆင့်။ စာရင်းသွင်း & ဝင်မည်
2 အဆင့်။ တစ်ဦးအစီအစဉ်ကိုသက်ဝင်
3 အဆင့်။ သင့် Channel ကိုမြှင့်တင်ပါ
အကယ်၍ သင်သည်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်နေ့စဉ်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူရခြင်းကိုစိတ်ထဲမထားပါကအခမဲ့စာရင်းပေးသူ ၁၀ ဦး အထိနှင့်တစ်နေ့လျှင်အခမဲ့ YouTube အကြိုက် ၂၀ ပါသောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်တူ YouTubers ကိုအခြား YouTube အကြားနောက်ကျောနှင့်ထွက် subscriber များအားရဖို့ရန်ဤလဲလှယ်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ရသည်။
လုံခြုံဘေးကင်းလုံခြုံ, ကို Safe
SoNuker ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုံခြုံပြီးလုံခြုံပါ! YouTube ချန်နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. အဘို့အပြစ်ပေးရကြဘူးကျနော်တို့ privacy ကို, လုံခြုံရေးနှင့်တင်းကျပ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတူလည်ပတ်။
ပရီမီယံ Options ကို
သငျသညျမစိုက်နဲ့အလိုအလျှောက် YouTube ကို subscriber များအားရဖို့ရန်ပိုနှစ်သက်နှင့်ဗီဒီယိုနေ့ရက်တိုင်း likes လျှင်, ကျနော်တို့သုည-အားထုတ်မှုနေ့စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုလက်ခံရရှိရန် paid အစီအစဉ်ကိုအကြံပြု!
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်ကိုလူတိုင်းသုံးစွဲဖို့အဘို့အလွန်အခြေခံများနှင့်ရိုးရှင်းသောဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ အကောင့်တစ်ခု Register login နှင့်အရာကြွင်းလေ Self-ရှင်းလင်းပါ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ရွေထောက်ခံမှုအသင်းကိုကူညီဖို့ကဒီမှာပါ! မေးခွန်းတစ်ခု, မှတ်ချက်, ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါသလား? ကျနော်တို့ကွာရိုးရှင်းတဲ့အီးမေးလ်ကနေကျနော်တို့ 24-72 နာရီအတွင်းတိုင်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင်တုံ့ပြန်ကြသည်။
SoNuker သည်သင့်အားလျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူလက်ခံရယူနိုင်မည့်ဆန်းသစ်သောကွန်ယက်တစ်ခုကိုပေးသည် အခမဲ့ YouTube မှာယူသူ ၁၀ ယောက် နှင့် 10 အခမဲ့ YouTube Likes ၁၂ နာရီတိုင်း ငွေပေးချေခြင်းအစီအစဉ်များရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အခမဲ့အစီအစဉ်များသည်သင်၏လမ်းကြောင်းကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ရန်သင်၏ YouTube အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရန်မလိုပါ၊ သင်၏ YouTube channel သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံပြီးလုံခြုံအောင်ထားပါ။
SoNuker ကိုလူသားများတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မင်းရဲ့အချိန်ကအရေးကြီးတယ်၊ ငါတို့နားလည်တယ်။ အခမဲ့ယူကျုးခံသူနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအခမဲ့ရရှိရန်အခြားလိုင်း ၂၀ ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးရယူပါ။ ၁၂ နာရီအတွင်းသင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုအတွက် ၁၂ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အခမဲ့ (သို့) ငွေပေးချေသည့်အစီအစဉ်ကိုသင်စတင်လုပ်ဆောင်သည့်အခါသင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများသည်ချက်ချင်းတိုးပွားလာသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ၁၂ နာရီတိုင်းအခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပါ၊ သို့မဟုတ် ၁၀၀% အလိုအလျောက်ငွေပေးချေသည့်အစီအစဉ်ကိုဖွင့်ပါ။ ပေးဆောင်သောအစီအစဉ်ကိုသက်ဝင်စေခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလက်ခံသူများကိုအလိုအလျောက်လက်ခံခြင်း!
၁၂ နာရီအတွင်း ၁၀ ယောက်ကိုရယူပါ
မင်းဗွီဒီယို ၂၀ ကို Like & Subscribe လုပ်ပါ
သငျသညျကိုကိုယ်တိုင် Activate အစီအစဉ်
1x တိုင်း 12 နာရီကိုသက်ဝင်
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ၁၀-၁၅ လက်ခံရရှိသူ။
Free YouTube Subscribers များများလိုချင်တဲ့အခါရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အမှားများ
သင်ဟာသူတို့ရဲ့ channel ကိုမြန်မြန်ကြီးထွားစေချင်တဲ့ YouTuber တစ်ယောက်လား။ နေ့စဉ်ရာချီသော YouTube ချန်နယ်များကိုစတင်သည့်အနေနှင့် YouTube ပေါ်တွင်ယခုထက်ပိုမိုထင်ရှားစွာရပ်တည်မှုသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ မင်းရဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာမင်းအပင်ပန်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်၊ မင်းရဲ့အမြင်တွေကဂဏန်းလေးလုံးကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖြတ်ဖို့ငြင်းဆန်နေတုန်းဘဲ။ လူတွေသန်းပေါင်းများစွာရဲ့အမြင်တွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာနေရာတိုင်းမှာမင်းကအောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
သင့်ချန်နယ်၏တိုးတက်မှုနှေးကွေးလာသည်ကိုသင်စိတ်ပျက်အားငယ်နေလျှင်သင်လိုအပ်သောအရာသည်အတိအကျဖြစ်နိုင်သည်။ အခမဲ့စာရင်းပေးသွင်းသူမရှိဘဲနှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများနှင့်အတူသင်၏ချန်နယ်သည်အချိန်နှင့်အမျှတိုးတက်လာနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ မကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူများစွာအတွက်ဖြစ်မလာပါဘူး။ ဤနေရာတွင်အခမဲ့စာရင်းပေးသွင်းသူများနှင့်အခမဲ့ကြိုက်နှစ်သက်သူများသည်သင်၏ချန်နယ်ကိုလိုအပ်သောထိတွေ့မှုကိုပေးနိုင်သည်။
အခမဲ့ YouTube Subscribers များကိုအဘယ်ကြောင့်ရသနည်း။
သင်၏ YouTube ချန်နယ်ကိုစောစောစီးစီးတွန်းအားပေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများ၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့ချန်နယ်မှာစာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်ကမင်းပလက်ဖောင်းပေါ်မှာမင်းဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောစရာရှိတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ YouTube ကိုအမှန်တကယ်စာရင်းသွင်းရန်လည်းအားပေးနိုင်သည်။ မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ပြီးသောအခါ၊ သင်၏ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများသည်သင်၏ YouTube ချန်နယ်ကိုသင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာချဲ့ပေးနိုင်သည်။
အလားအလာရှိသော YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး သည်ဗီဒီယိုကိုတွေ့သောအခါသူတို့သည်သင်၏ဗီဒီယို၏နှစ်သက်မှုနှင့်ကြည့်ရှုမှုကိုစစ်ဆေးရန်ရပ်တန့်လိမ့်မည်။ သူတို့ကမင်းရဲ့ channel မှာစာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်ကိုလည်းကြည့်တယ်။ မင်းရဲ့ချန်နယ်မှာစာရင်းသွင်းသူပိုများနေတယ်လို့ထင်ရင်ဒါကမင်းကလူအများကြီးလိုက်နာပြီးယုံကြည်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေနိုင်တယ်။ ဤအလှည့်သည်သင်၏ YouTube ဗီဒီယိုများကိုအမှန်တကယ်နှစ်သက်ရန်နှင့်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုစာရင်းသွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။
သင်၏ YouTube ချန်နယ်ကိုချဲ့ရန်အောင်မြင်သော YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများကိုအောင်မြင်စွာသုံးနိုင်ရန်အဓိကသော့ချက်မှာသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းသင့်ချန်နယ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြီးထွားစေခြင်းဖြစ်သည်။ လူတို့သည်နေ့ချင်းညချင်းနောက်လိုက် ၁၀၀၀၀၀ ကိုရုတ်တရက်တွေ့ရှိလျှင်၎င်းသည်သံသယဖြစ်စရာဖြစ်လာသည်။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမင်းရဲ့စာရင်းဇယားကိုဖြတ်ပြီးလူအချို့ကဘာကြောင့်ဒီလောက်မြန်မြန်စာရင်းသွင်းရလဲဆိုတာကိုမင်းမျှော်လင့်နိုင်တယ်။ မင်းမှာကြီးထွားမှုကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အပိုင်းအစတွေမရှိရင်သူတို့ကစာရင်းသွင်းသူတွေကအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့နားလည်နိုင်တယ်။
အဲဒီအစားမင်းကသံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲအဲဒီ့နံပါတ်ကိုရောက်ဖို့မင်းရဲ့အခမဲ့ YouTube subscriber တွေကိုဖြန့်နိုင်တယ်။ SoNuker သည်သင်အတိအကျလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင်နောက်လိုက်ဆယ် ဦး မှနှစ်ဆယ် ၀ န်းကျင်ခန့်တိုးတက်မှုနှင့်အတူသင်၏ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်တသမတ်တည်းမြင့်တက်လာသည်ကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းဖြန့်နေသော်လည်းဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမြန်နှုန်းကမင်းရဲ့ချန်နယ်ကိုသဘာဝကျကျချဲ့တာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုမြန်ပါတယ်။
ဤနောက်ကွယ်မှအကြောင်းအရင်းမှာလူကြိုက်များသော YouTube channel များမှအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများအလုံအလောက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အာရုံကိုဆွဲထုတ်ချင်ရင်မင်းလိုချင်တဲ့အာရုံကိုရပြီလို့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကဒါကမင်းလိုချင်တဲ့အာရုံကိုရပြီ။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်သင်၏စွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူသည်အထိ၎င်းသည်အတုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ YouTube စာရင်းသွင်းသူအသစ်များ၊ ကြည့်ရှုမှုများနှင့်သင်၏ချန်နယ်များသို့ရောက်စေသည်။
များစွာသော YouTube subscriber များစောလွန်းခြင်းသည်လူများစွာပြုလုပ်လေ့ရှိသောအဓိကအမှားတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ဤတွင် YouTube subscribers များ ၀ ယ်သောအခါသင်ရှောင်သင့်သောအမှားများအကြောင်းသင်သိသင့်သောအရာများနှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။
စာရင်းသွင်းသူတစ်သန်းရှိသော်လည်းရုပ်သံအများစုတွင်မှတ်ချက်များ (သို့) ကြိုက်နှစ်သက်မှုမရှိ၊ ဗွီဒီယိုအများစုတွင်ကြည့်ရှုသူရာဂဏန်းမျှသာရှိသည်။ သင် YouTube subscribers များရရှိသည့်အခါ၊ စာရင်းပေးသွင်းသူများ၊ ကြိုက်နှစ်သက်မှု၊ မှတ်ချက်များနှင့်ကြည့်ရှုမှုအချိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
မှတ်ချက်များနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများသည်ဗီဒီယိုများအကြားကွဲပြားနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြသသင့်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုစီ၌ပျမ်းမျှမှတ်ချက်များကိုကြည့်သည့်ပုံစံဖြင့်လာသည်။ မင်းရဲ့ကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်ကမင်းရဲ့ဗွီဒီယိုတွေဆီက like နဲ့ comment အရေအတွက်ထက်အမြဲပိုများတယ်။ မင်းရဲ့ဗွီဒီယိုတွေကိုကြိုက်တဲ့အရေအတွက်ကများသောအားဖြင့်မှတ်ချက်များထက်ပိုများလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့မင်းရဲ့ဗီဒီယိုမှာမကြိုက်တာထက်ကြိုက်တာပိုရှိသင့်တယ်။ မကြိုက်တာများလွန်းခြင်းသည်ဆိုးရွားစွာထင်ဟပ်စေပြီး YouTube ကြည့်ရှုသူများကိုသင်၏ချန်နယ်သို့စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုတားမြစ်နိုင်သည်။
SoNuker ဖြင့်သင်သည် YouTube subscribers များကိုသာမက YouTube likes များကိုရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်လိုအပ်သောအမြင်များနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများအကြားဟန်ချက်ညီမှုကိုအောင်မြင်စေပြီးလျင်မြန်စွာချဲ့ထွင်နိုင်သောချန်နယ်တစ်ခု၏အသွင်အပြင်ကိုပေးနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။
သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်အခြားအချက်တစ်ခုမှာသင်၏ YouTube subscribers များမှသင်မျှော်လင့်သောအရာကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအမှန်တကယ်စာရင်းသွင်းသူကဲ့သို့ပြုမူရန်သင်မျှော်လင့်ပါကသင်စိတ်ပျက်သွားနိုင်သည်။ အခမဲ့ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများသည်ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်လာနိုင်သည်။
ဤအရာများထဲမှပထမသည် bot များဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် YouTube ချန်နယ်အသီးသီးအတွက်စာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်ကိုတည်ဆောက်ရန်သီးခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖန်တီးထားသော YouTube ချန်နယ်များဖြစ်သည်။ သူတို့မှာပရိုဖိုင်ပုံတွေမရှိသလို၊ သိသာထင်ရှားတဲ့စတော့ရှယ်ယာပုံတွေမရှိတာလည်းရှိတတ်သည်။ တော်တော်များများကမင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာ spam comments တွေချန်ထားခဲ့လေ့ရှိတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ channel သို့စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုချက်ချင်းဟန့်တားနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ YouTube မှာလည်းဒီလိုအကောင့်တွေအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် YouTube မှာယူသူစာရင်းပေးချင်ရင်တောင် bot တွေကတဆင့်သူတို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေကိုရှောင်ပါ။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်သူတို့၏ပုံစံအတိုင်းချဲ့ထွင်ရန်နှင့်သူတို့၏ channel ကိုကြီးထွားရန်ကြိုးစားနေသောအခြား YouTube content ဖန်တီးသူများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ရရှိသော YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများသည်သင်၏ချန်နယ်နှင့်အလွန်အမင်းထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်စစ်မှန်သောအကောင့်များဖြစ်သည်။ မင်းသူတို့နဲ့တူတူလုပ်ရင်တော်တော်များများကမင်း YouTube ကြိုက်တာကိုထားခဲ့လိမ့်မယ်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများထပ်တိုးခြင်းကမင်းရဲ့လိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုကိုရစေနိုင်တယ်။ ဒါက YouTube algorithm ကမင်းရဲ့ channel ကိုစာရင်းသွင်းပြီးမင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းကိုစပြီးသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။
မင်းရဲ့ဗွီဒီယိုတွေမှာမှတ်ချက်တွေနည်းတာနဲ့ပတ်သတ်လို့မင်းစိုးရိမ်တယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ YouTube subscriber တွေကိုအကူအညီတောင်းဖို့စဉ်းစားပါ။ SoNuker ကဲ့သို့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတွင်သင်၏ YouTube ချန်နယ်၏တိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အခြား YouTube အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများနှင့်ပူးပေါင်းနိုင်သည်။ ထိုသို့သောကူးလူးဆက်ဆံမှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်သည်အခြားအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများကိုလည်းကူညီရန်မျှော်လင့်ကြောင်းသင်စဉ်းစားသင့်သည်။
၃။ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများကမင်းအတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ
မင်းရဲ့ချန်နယ်ကို YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူတစ်ခုတည်းကိုသာမှီခိုမနေဘဲနဲ့မင်းရဲ့ချန်နယ်အတွက်တကယ့် YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူတွေကိုလိုချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများကိုအသုံးပြုခြင်း၏နောက်ကွယ်မှစိတ်ကူးသည်သင်၏ချန်နယ်တိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နံပါတ်များကိုသုံးသင့်သည်။ ဤအလှည့်သည်သင်၏အကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမည့်သူမှအမှန်တကယ် YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။
YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများရရှိသည့်အခါသင်လုပ်သမျှသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်၏ပါဝင်မှုကိုထိတွေ့မှုတိုးစေရန်ကြိုးစားသည်။ မင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင် YouTube ရဲ့ algorithm ကမင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုမြှင့်တင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ YouTube ပေါ်ရှိနေရာတိုင်း၌လူကြိုက်များသောအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူအသစ်များကိုအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။
သင်ဟာ YouTube channel တစ်ခုရှိနေတာကြာပြီဖြစ်ပေမယ့်ကြည့်ရှုမှုနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေမှာအောင်မြင်မှုအနည်းငယ်တွေ့ခဲ့တယ်။ ထို့နောက် YouTube subscribers ရယူခြင်းမှလည်းသင်အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်သည်။ မင်းကြည့်ရှုသူပိုမများဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့ဗွီဒီယိုကိုဘယ်သူ့ကိုမှအကြံဥာဏ်မပေးတာနဲ့လုံလောက်တဲ့ထိတွေ့မှုမရခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းနေ့စဉ် YouTube subscriber အနည်းငယ်သည်သင်၏အကြောင်းအရာသည်ထိတွေ့မှုရလာသည်ဟုထင်ရန် algorithm ကိုရရှိနိုင်ပြီးထို့ကြောင့်ရာထူးတိုးရန်လိုအပ်သည်။
YouTube တွင်အောင်မြင်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အကြောင်းအရာအရည်အသွေးပေါ်မူတည်သည်။ မင်းမှာ YouTube subscriber သန်းချီရှိနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အရည်အသွေးမြင့် content တွေမရှိရင်၊ တကယ့်ကြည့်ရှုသူတွေဆီကနေမင်းလိုချင်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အစစ်အမှန်ကြည့်ရှုသူများနှင့်တည်ငြိမ်သောတိုးတက်မှုသည်ပလက်ဖောင်း၏သမိုင်းမှတ်တိုင်များကိုရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သောကြောင့်သင်၏ချန်နယ်အတွက်အရှိန်အဟုန်ကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ချန်နယ်ပေါ်ရှိထိတွေ့မှုနှင့်ဆွဲအားအချို့ကိုသင်တီထွင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် မင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုငွေရှာပြီး YouTube နဲ့ပူးပေါင်းပါ။ အဲဒီကန ဦး အရှိန်ကိုစတင်ခြင်းကမင်းရဲ့ YouTube ချန်နယ်ကိုကျရှုံးမှုနဲ့အောင်မြင်မှုကိုခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဤနေရာတွင်အခမဲ့ YouTube subscriber များကသင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည် YouTube subscriber များအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုအားထားမနေသင့်ဘဲသင်၏အောင်မြင်မှုကိုအားဖြည့်ရန်သူတို့၏အကူအညီကိုသုံးပါ။
သင်ဖန်တီးသောအကြောင်းအရာသည် YouTube ပေါ်တွင်တည်မြဲသောချန်နယ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုအာရုံစိုက်ပြီး၊ YouTube ရဲ့စာရင်းပေးသွင်းသူတွေကဘေးချင်းယှဉ်သုံးပြီးအဲဒီ့အကြောင်းအရာရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေလို့မင်းကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်နိုင်တယ်။ စစ်မှန်သောအမြင်များ၊ စာရင်းပေးသွင်းသူများနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနောက်သို့လိုက်နေသောနောက်ကန့်သတ်ချက်ကိုသင်အမြဲရှာဖွေနေသင့်သည်။
သို့သော်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများစွာသည်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်မေ့လျော့တတ်ကြသည်။ အဲဒီအစားသူတို့က YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်နဲ့ YouTube ကိုသူတို့အောင်မြင်ပုံပေါ်ဖို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမင်းရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းက free subscribers နဲ့ likes တွေကနေတကယ့်ကြည့်ရှုသူတွေကသိသာထင်ရှားလာနိုင်တယ်။ ဤသို့ဖြစ်လာပါကအလားအလာရှိသောစာရင်းပေးသွင်းသူများစွာသည်သင်၏အကြောင်းအရာနှင့်ပါ ၀ င်ရန်သတိထားလိမ့်မည်။
မင်းမှာအရည်အသွေးမြင့် content တွေရှိရင်မင်းရဲ့ YouTube subscribers နဲ့ likes တွေကတဆင့်မင်းရရှိထားတဲ့နံပါတ်တွေကိုမင်း channel အတွက်တိုးတက်ဖို့အောင်မြင်စွာအသုံးချနိုင်ပြီ။
YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများနှင့် YouTube ကြိုက်များကသင့်ချန်နယ်ကိုတိုးပွားအောင်ကူညီနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်သင့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ YouTube ချန်နယ်ကိုကြီးထွားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုအခြားနည်းဗျူဟာများနှင့် တွဲ၍ သုံးလျှင် ပို၍ အောင်မြင်သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်သင်က YouTube မှာယူသူစာရင်းဝင်နေပြီဆိုရင်မင်းရဲ့ချန်နယ်အတွက်အမှန်တကယ်စာရင်းပေးသွင်းသူပိုများလာအောင် Giveaway တွေ၊ ပြိုင်ပွဲတွေ၊ ကူပွန်တွေလိုနည်းဗျူဟာတွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ချန်နယ်အတွက်အလားအလာရှိသောစာရင်းပေးသွင်းသူများ၏အာရုံစိုက်မှုနှင့်အတူသူတို့၏အာရုံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားချင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ချန်နယ်ကိုစာရင်းပေးသွင်းရန်အခွင့်အလမ်းကိုတိုးစေသည်။
လက်ဆောင်များကိုသုံးခြင်း၊ သင်၏ချန်နယ်ကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသူများကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်သင်၏ကြည့်ရှုသူများနှင့်ပါ ၀ င်ရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေခြင်းတို့သည်သင်၏ချန်နယ်အတွက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်စေနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ချန်နယ်ကိုတိုးဖို့ YouTube Subscribers တွေအခမဲ့ရဖို့ဘယ်လောက်ကြာအောင်စောင့်သင့်သလဲ။
သင်၏ချန်နယ်သို့သင်၏ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများကိုပထမဆုံးအကြိမ်လက်ခံသောအခါ၊ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်သင့်ချန်နယ်သို့သွားရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်တစ်လကုန်သွားပြီးမင်းရဲ့ channel ကမင်းထင်တာထက်ပိုတိုးတက်လာတယ်ဆိုကြပါစို့။ ဤသည် YouTube စာရင်းပေးသူများထံမှအကူအညီရယူခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
အဖြေမှန်မှာသင်သည် YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများနှင့် YouTube ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုမည်မျှကြာအောင်မှီခိုသင့်သနည်းဟူသည်အချက်များပေါ်မူတည်သည်။
YouTube စာရင်းပေးသူများ၏အကူအညီမပါဘဲသင်၏ YouTube ချန်နယ်ကိုဆက်လက်တိုးပွားစေနိုင်သည်ဟုသင်လုံလုံလောက်လောက်ယုံကြည်ပါသလား။
အခြေအနေတစ်ခုချင်းစီမှာ YouTube subscribers တွေကိုဘယ်လောက်ကြာကြာဆက်မှီခိုသင့်တယ်ဆိုတာပြောခွင့်ရှိတယ်။ သို့သော်သင်၏အကြောင်းအရာသည်ဆွဲအားရရှိရန်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သေးသလားဆိုသည်မှာလည်းအဆုံးအဖြတ်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်အားကိုးလိုသည်နှင့်သင်အလိုရှိသည့်အခါတိုင်း YouTube subscribers များကိုမှီခိုခြင်းမှရပ်တန့်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်လိုအပ်ပါကနောက်ပိုင်းတွင် YouTube subscribers များကိုတောင်းနိုင်သည်။
SoNuker ဖြင့်သင်သည်အခမဲ့ YouTube subscriber များကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအားကိုးနိုင်သည်။ သင်၏နံပါတ်များသည်တစ်လအတွင်းမြင့်တက်လာသည်ကိုကြည့်ပါ၊ ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ချန်နယ်ကိုသင်တစ် ဦး တည်းဖြင့်ဆက်လက်ကြီးပွားနိုင်သည်ဟုထင်လျှင်ကောင်းပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူတို့သည်တစ်ခုတည်းသောဗီဒီယိုများ (သို့) ဗီဒီယိုအနည်းငယ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အထူးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းသူများနှင့် YouTube ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကိုသုံးကြသည်။
မင်းရဲ့ထိတွေ့မှုလိုအပ်ပုံနဲ့မင်းရဲ့ချန်နယ်ကြီးထွားဖို့ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူတွေကိုဘယ်လိုသုံးနိုင်သလဲဆိုတာကမင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ဒါပေမယ့် YouTube subscriber များနှင့် YouTube likes များရဲ့အကူအညီကိုသင်လိုအပ်နေကြောင်းသင်တွေ့ရင်သင်ကူညီဖို့ SoNuker ကိုအမြဲအားကိုးနိုင်ပါတယ်။
လူတွေဘာကြောင့်အခမဲ့ YouTube Subscribers ကိုရွေးချယ်ကြတာလဲ။
အောင်မြင်မှုဆီသွားတဲ့လမ်းကခက်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ YouTube မှာယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့်အခက်အခဲကပိုပိုဆိုးလာတယ်။ လူများသည်ကစားကွင်းကိုအဆင့်မြှင့်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနှင့်အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူအသစ်များဖြစ်လျှင်လူများက YouTube ကိုမှီခိုအားထားကြသည်။
၎င်းသည် YouTube ကဲ့သို့ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သတိပြုမိရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့သော်သင်သတိထားမိသည်နှင့် YouTube algorithm သည်သင်၏ဗွီဒီယိုများကိုထောက်ခံပြီးမြှင့်တင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အောင်မြင်မှုသည်သဘာဝအတိုင်းလိုက်သွားနိုင်သည်။ SoNuker မှတဆင့်သင်သည်လည်းအလှည့်ကျကူညီနိုင်သောစစ်မှန်သောနောက်လိုက်များကိုသင်ရှာနိုင်သည်။
အခမဲ့ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများကိုမရွေးချယ်ဘဲရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်မှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ချန်နယ်ကိုတိုးတက်စေရန် YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများမည်သို့ကူညီနိုင်မည်အကြောင်းလက်တွေ့ကျသောမျှော်လင့်ချက်များကိုတည်ဆောက်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်သင်ပိုချဲ့ထွင်နိုင်ပြီးပိုမြန်မြန်ကြီးထွားလာနိုင်သည်။
မှန်ကန်သော YouTube နောက်လိုက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသော YouTube ကြိုက်နှစ်သက်မှုများသည်သင့်ချန်နယ်ကိုအောင်မြင်ရန်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုသတိထားမိဖို့ YouTube algorithm ကိုစောင့်နေမယ့်အစားမင်းအဲဒီအရာကိုမင်းကိုယ်မင်းမဖိတ်ဘူးလား။
တစ်ရက်လျှင်စာရင်းပေးသွင်းသူ ၁၀ ဦး မှနှစ်ဆယ် ဦး အထိကဲ့သို့သော YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ချန်နယ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အစစ်အမှန်တိုးတက်မှု၏အထင်အမြင်ကိုပေးသည်နှင့်အစစ်အမှန်ကြည့်ရှုသူများကိုသင်၏ချန်နယ်ကိုစာရင်းပေးသွင်းရန်တွန်းအားပေးနိုင်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်၏ဗွီဒီယိုများတွင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများရခြင်းကိုသင်မမေ့နိုင်ပါ။ လိုက်ခ်များနှင့်မှတ်ချက်များသည်သင့်ချန်နယ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပြသပြီးတိုးတက်မှု၏အဓိကညွှန်ကိန်းများဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမင်းလိုအပ်တာကြိုက်နှစ်သက်မှုမရသေးဘူးဆိုရင်၊ YouTube ကြိုက်တာတွေကမင်းအတွက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
SoNuker ပလက်ဖောင်းကို YouTube subscriber များသုံးသောအခါသင်၏ဗီဒီယိုများတွင် bot များ (သို့) spam comments များအမြဲတစေပေါ်လာမှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ အဲဒီအစားမင်းက YouTube ကြိုက်နှစ်သက်မှုပေးဖို့မင်းရဲ့ YouTube subscriber တွေကိုအားကိုးနိုင်တယ်။ YouTube အတွက်ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်ကြည့်ရှုမှုသည်အလွန်အရေးကြီးလာသည်။ မကြိုက်တာတွေထက်ပိုများလာပြီးစာရင်းသွင်းသူအသစ်တွေတဖြည်းဖြည်းများလာတာက YouTube မှာမင်းရဲ့ချန်နယ်ကိုကြီးထွားဖို့မင်းလိုအပ်တဲ့အရာပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားသင်၏အောင်မြင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန် SoNuker ကိုသင်အားကိုးနိုင်သည်။ သင်၏ချန်နယ်၏တိုးတက်မှုအရှိန်ကိုစကေးနှင့်အခမဲ့စာရင်းပေးသွင်းသူများ၏အကူအညီဖြင့်ကျော်ကြားသော YouTuber တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါစေ။ မင်းမလိုအပ်တော့ဘူးလို့မင်းခံစားရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုသုံးတာကိုရပ်ပစ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်တချို့ဗီဒီယိုတွေ၊ အကြောင်းအရာအပိုင်းတွေကိုမြှင့်တင်ဖို့သူတို့ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများအတွက်သင်ပြုလုပ်နိုင်သောအမှားများစွာရှိသော်လည်းကျန်းမာသောသတိရှိခြင်းက၎င်းတို့ကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီနိုင်သည်။ SoNuker ကဲ့သို့မှန်ကန်သောပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်မှုကိုအားဖြည့်ရန်ဂဏန်းများကိုမည်သို့သုံးရမည်ကိုသိသည်။ SoNuker နှင့်သင်၏ YouTube အိပ်မက်များသို့လမ်းကိုစတင်တည်ဆောက်ပါ။
3rd ဇန်နဝါရီလ 2022
ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ဒိုမိန်းတွင် Facebook၊ Twitter၊ Instagram၊ LinkedIn၊ TikTok နှင့် Reddit တို့ကို နာမည်ပေးရန်အတွက် ကစားသမားများစွာရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်သော်,...
24th ဒီဇင်ဘာလ 2021
Followers များပိုမိုရရှိရန် YouTube ၏ VR အင်္ဂါရပ်ကို အများစုပြုလုပ်နည်း
VR (သို့) Virtual Reality သည် ကြည့်ရှုသူများအား လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပထမလူကို ပေးဆောင်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Virtual Reality သည် high-end အတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါ။
2nd ဒီဇင်ဘာလ 2021
သင့်အား "အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်" ကမ်းလှမ်းရန် YouTube စာရင်းသွင်းသူများ ပိုမိုရရှိရန် အကြံပြုချက်များ
21 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 2021 ရက်နေ့တွင်၊ YouTube သည် အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများကို YouTube တွင် ငွေရှာရန် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုပေးသည့် အင်္ဂါရပ်အသစ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ...
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ၀ ယ်ယူစရာမလိုဘဲတစ်ကြိမ်တစ်ခါ ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲငွေပေးချေခြင်းမပြုလုပ်ရန်။
ဝန်ဆောင်မှု 50 YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများ ($ 20) 100 YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများ ($ 30) 300 YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများ ($ 45) 500 YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများ ($ 60)
ပေးပို့နှုန်း - တစ်နေ့လျှင်သုံးစွဲသူ ၁၀-၁၀၀
ဝန်ဆောင်မှု 10 စိတ်တိုင်းကျ YouTube ကို Comments ($ 20) 20 စိတ်တိုင်းကျ YouTube ကို Comments ($ 35) 30 စိတ်တိုင်းကျ YouTube ကို Comments ($ 50) 50 စိတ်တိုင်းကျ YouTube ကို Comments ($ 80) 100 စိတ်တိုင်းကျ YouTube ကို Comments ($ 140)
အဆိုပါ 500,000 + အဖွဲ့ဝင်များပြီးသားအခမဲ့ YouTube ကို subscriber များအားရဖို့ SoNuker သုံးပြီးနှင့်ဗီဒီယိုယနေ့ likes Join!
အခမဲ့ YouTube အကြိုက်များရယူပါ
SoNuker လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးန်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပေးသည်နှင့်အခမဲ့ YouTube ကို subscriber များအားရရှိမှုများအတွက်စီးပွားဖြစ်ကွန်ယက်နှင့်အခမဲ့ YouTube ကို likes ။
သင်၏ YouTube စာရင်းသွင်းသူများကို ဗီဒီယိုရှည်ကြီးဖြင့် ထိုင်ကြည့်ရန် တွန်းအားပေးနည်း
YouTube ကြည့်ရှုမှုများနှင့် သိမ်းဆည်းမှုများကို ပိုမိုအားပေးသည့် ဗီဒီယိုများ ပြုလုပ်ရန် ခေတ်စားသော အကြံပြုချက်များ